Muxuu RW Rooble uga gaabsaday colaadda Guriceel? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu RW Rooble uga gaabsaday colaadda Guriceel?
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble ayaan weli ka hadlin dagaalka maalintii 4-aad galay ee ka socda degmada Guriceel, kaas oo ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay ku dhawaad 200,000 oo qof.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo ka masuul ah amniga dalka iyo arrimaha doorashooyinka, ayaan wali ka hadlin xaaladda Guriceel, tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya Koox diimeedka hubeysan ee ASWJ iyo Ciidanka Xoogga dalka, saddex maalin ka hor.
Inkastoo, war-saxaafadeed ku saabsan xiisadda Galmudug uu soo saaray 2 October 2021, maalin kadib markii ASWJ, la wareegtay gacan ku heynta Guriceel, hadana Ra’iisul Wasaaraha, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay inuu ka gaabsaday mushkiladda ka aloosan degmada ganacsiga ku wanaagsan ee qorrax-dhaca u xigta magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galgaduud.
RW Rooble, wuxuu 24 maalin ka hor, si aan gambasho lahayn u sheegay in Mudug iyo Galgaduud, ay ka jirto Dawlad-Goboleed haysata sharciyad buuxda, isla-markaana ay mas'uul ka tahay amniga degaannada Galmudug, lagana dheeraado tallaab kasta oo u muuqata mid lagu carqaladaynayo maamulkaas.
“Cid kasta oo qabta tabasho waa in ay u martaa xalka dariiq nabadeed. waana in la joojiyaa abaabulka hubaysan iyo weerarada baal-marsan sharciga taas oo halis ku ah xasilloonida, nidaamka iyo kala danbaynta”. Ayuu xilligaas yiri Rooble.
Wuxuu ku sii daray in hoggaanka Galmudug ay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nabadgalyada, kala danbaynta iyo wadajirka reer Galmudug. Taas ayaana loo fasirtay in Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha uu damaca hoggaanka ASWJ, ee xukun qori ku doonka ah uu u arko mid sharci darro ah.
Hayeeshee, Rooble, oo tan iyo markii uu dib uga soo laabtay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, si weyn uga gaabsaday arrimo siyaasadeed oo waaweyn, ayay dul-hoganaayaan eedo la xariira ka aamusnaanta dagaalka kharaar ee afarta maalin ka holcaya Guriceel.
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa ku guuldarreystay inuu ugu yaraan ku baaqo in hay’adaha gargaarku u gurmadaan shacabka danyarta ah ee la barakiciyay isla-markaana labada dhinac joojiyaan dagaalka, sababay khasaaraha xooggan.
Sidoo kale, waxaa layaab lagu tilmaamay, in qeyb ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidanka Qalabka Sida, ka dagaallayaan magaalada, xilli la xasuusto in hoggaanka amniga dalka 1 May 2021, lagu wareejiyay Ra’iisul Wasaaraha, taas muujineysa inuu raalli ka yahay dagaalka Guriceel.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ku kala aragti duwan aamusnaanta Xukuumadda, waxeyna qaarkood sheegayaan in Rooble, uu si adag kaga soo horjeedo, yagleelidda koox hubeysan oo ah awood la loollameysa Dowladda.
Dad kale, ayaa ku doodaya in Rooble, uu hoggaanka Amniga dalka, si hoose ugu wareejiyay Farmaajo, kadib socdaalkiisii dalka Qatar, isla-markaana Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ay doonayaan in ay awoodda ciidan ee dowladda dhexe, tan Galmudug iyo midda maleeshiyaadka halka beel u badan ee ASWJ, ay ku burburiyaan Guriceel.
Dhanka kale, Rooble, ayaa la sheegayaa inuu saaxiib siyaasadeed ka yeeshay Qoorqoor, isla-markaana ay hore uga wada hadleen sida laga yeelayo Ahlu Sunna, balse taasi ma noqon karto qiil ku filan, ka gaabsashada xiisaddan oo ah mid daba dheeraatay.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa fajac ka muujinaya aragtida Rooble ee dagaalka Guriceel, waxaana si rasmi ah loo sheegi karin sababaha ku riixaya inuu qariyo mowqifkiisa ku aaddan colaadda, maadaama uu iminka yahay qofka ay sida dhabta ah ugu go'do talada dalka.